Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Folder on Mac
> Resource > Mac > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Folder on Mac
Waxaan soo kaban karto, tirtiray Folder on Mac?
Waxaan si qalad ah la tirtiro galka qoyska oo dhan on my Pro Macbook qalad ah. Waxaan soo jiiday gal ah in folder Trash ka dibna waxaa loo madhiyo. Waxaan leeyahay videos qaali badan qoyska iyo sawiro ku folder in. Waxaan u baahan inuu ka soo kabsado folder iyo fadlan i siiyo talooyin. Best xiriira.
Haddii aad sameysay gurmad ah oo gal la Time Machine, waxaad soo kaban karto, folder tirtiray on Time Machine. Haddii aadan haysan, uma baahnid in aad si aad u welwelsan aad. Indeed, folder tirtiray waxaa la qorayaa xogta sida geli karin on your Mac. Sidaas, ilaa iyo inta folder tirtiray aan la overwritten by xog cusub oo ku saabsan Mac, waxaad u soo celin karo iyadoo la kaashanayo Mac tirtiray software kabashada folder.
Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamijka sida in aad ka caawinaysaa in la soo celiyo folder lumay on Mac effortlessly ah, ma fayl arrinta ku saabsan Mac lumay, maxaa yeelay tirtirka, formatting ama xataa musuqmaasuqa. Iyada oo taageero u ah, waxaad si fudud u soo kaban karto, ku dhowaad dhammaan noocyada file ka lumay folder Mac, oo ay ku jiraan sawirrada, files audio, videos, document files, files archive iyo in ka badan. Currently, qalab si buuxda u la jaan qaada Macbook Air, Macbook Pro, iMac, Mac Mini, iwm
Hel version tijaabo ah barnaamijka inuu ku soo bilowdo Mac tirtiray kabashada folder hadda ah!
Kabsado tirtiray Folder on Mac 3 Talaabooyinka
Fiiro gaar ah: Fadlan ha soo dajiyo app ku hadlo xijaab / mugga in folder waa la tirtiraa aad Mac.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada inuu ku soo bilowdo Mac tirtiray kabashada folder
Burcad codsiga aad Mac oo aad arki doonaa suuqa kala ah sida image hoose.
Si aad u soo kabsado folder tirtiray on Mac, oo aad qaadi karto "lumay Recovery File" mode sida isku day ah oo hore.
Tallaabada 2 Sawirka xijaab / mugga in folder la tirtiray ka
Markaas barnaamijka tusi doono oo dhan qoruhu / muda aad Mac, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan mid ka mid ah in folder la tirtiray ka oo guji "Scan" si ay u bilaabaan raadinaya xogta tirtiray waxa on.
Tallaabada 3 kabsado tirtiray folder on Mac
Ka dib markii iskaanka, ka helay waxyaabaha ku saabsan la marsiiyey xijaab / mugga lagu soo bandhigi doonaa "Folder" ama "Nooca File" furmo.
Waxaad dooran kartaa folder aad tirtiray iyo u arkaan sida badan oo files waa la soo saari karaa. Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan folder ama faylasha aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji "Ladnaansho" in ay dib u badbaadin si aad Mac.
Fiiro gaar ah: Si looga fogaado xogta overwritten, fadlan ha ka badbaadin galka kabsaday ama faylasha dib ugu xijaab / mugga asalka ah.
Recovery iWork File: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray iWork Files
Recovery File PSD: Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray PSD Files
Isticmaal dhamaystiran oo dhan-in-mid video qalabeed si loogu badalo, edit, kor loogu qaado, download, gubi, abaabulo, qabashada, iyo ciyaaro wax videos on your Mac.
Sida loo soo dir fariimaha qoraalka ka soo Mac in Phones
Sidee si ay u gudbiyaan Lugood Music ka PC si Mac
Guide Ultimate inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Trash madhiyey Mac OS X
Sidee loo nadiifiyaa MacBook Pro / MacBook Air / iMac
Sophos Anti-Virus u Mac Home Edition
Aspyr Media American McGee ee Alice u Mac
Celtx u Mac
iLivid u Mac: Online Video Download la One Click (El Capitan mid)
iMac Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga iMac
Sidee inuu ka soo kabsado Photos tirtiray ka Mac SD Card